October 2018 – onlinedarpan:
१४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले १४ सहसचिवहरुको काज सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवहरुको सरुवा गरेको हो । सरुवा भएकाहरुलाई रमाना पत्रसमेत दिइसकिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । हेर्नुहोस् को-कहाँ सरुवा भए ? क्रम संख्या नाम थर पहिले अहिले १. प्रदीप राज कँडेल विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
काठमाडौं,कात्तिक १२, २०७५। रसुवाको कालिका गाँउपालिका–४ अम्बासमा आइतबार राति टिपर दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा चालकसहित ३ जना घाइते भएका छन्। बेत्रावतीबाट बालुवा लोड गरि पारच्याङतर्फ जाँदै गरेको बा ४ ख ८३६६ नम्बरको ट्रिपर अनियन्त्रित भई सडकबाट अन्दाजी १५० मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा ट्रिपरमा सवार नौकुण्डा गाँउपालिका–३ का ४० वर्षीय विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
भक्तपुर । नेपालको दोस्रो बुढो अस्पताल भक्तपुर अस्पताल हाल विरामीको हित र स्वास्थ्यमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा बढि चल्न थालेको छ । अस्पतालमा आउने मेसु सुदा देवकोटा एवं कर्मचारीहरुको आफ्नो स्वार्र्थका कारण यस्तो समस्या आएको हो । विरामीको हितको कार्य भन्दा पनि आफ्नो खल्तीको हित हुने काममा बढि चासो दिने अस्पताल प्रमुख भएका कारण विरामीको विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…